Black Panther ရဲ့ 100% Rotten Tomatoes ရမှတ် RIP သွားရှာပြီ - MoviesFan
Black Panther ရဲ့ 100% Rotten Tomatoes ရမှတ် RIP သွားရှာပြီ
အရမ်းဝမ်းမနည်းသွားပါနဲ့ဦး.. ကျန်တဲ့ ၉၉% သော review တွေက အကုန်ကောင်းပါတယ်။
ဖြစ်ပုံကဒီလိုပါ.. ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်နေ့စတင်ပြသမယ့် Black Panther ရုပ်ရှင်ဟာ လောလောဆယ်အချိန်မှာ press media တွေအတွက် ပြသပြီးသွားပါပြီ။ အဲဒီတော့ ထုံးစံအတိုင်း critic တွေက Rotten Tomatoes မှာ rating တွေ ကိုယ်စီကိုယ်စီသွားပေးကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ ၇၄ ခုမြောက် review အထိ ၁၀၀% ‘Fresh’ rating ရပြီး ပွဲခံနေတုန်းမှာ သကောင့်သားတစ်ကောင်က ‘Rotten’ rating တစ်ခုလာပေးလိုက်တော့ သွားရှာပါလေရော ၁၀၀% rating အိပ်မက်က။ အဲဒါကြောင့် လောလောဆယ်ဒီဆောင်းပါးရေးနေချိန်မှာဆိုရင် review ပေါင်း ၇၇ ခုမှာ ၇၆ ခု ‘Fresh’ – ၁ ခု ‘Rotten’ နဲ့ ၉၉% ဖြစ်သွားရပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒါရိုက်တာ Ryan Coogler ရဲ့ Black Panther ဟာ RT rating ၁၀၀% မဖြစ်နိုင်တော့တာကလွဲပြီး ကျန်တာတွေအကုန်လုံးရှယ်ပါပဲ။ ကျန်တဲ့ ၇၆ ခုသော reiew တွေက ဒီကားကို အမှန်အကန်ချီးကျူးထားကြပါတယ်။
Critic တစ်ယောက်ကတော့ Black Panther ကို MCU ထဲမှာအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားလို့ပါ ချီးမွမ်းထားပါတယ်။
Black Panther has surpassed Iron Man as the best film of the MCU. We Live Entertainment
Black Panther ကိုနောက်ထပ် critic တွေသဘောကျရတဲ့အကြောင်းရင်းက superhero တွေ ပလိန်းကြီးဗျင်းနေရုံနဲ့ပြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ နိုင်ငံရေးတွေနဲ့ပါ ခိုင်ခိုင်လုံလုံ တည်ဆောက်ထားတဲ့ဇာတ်အိမ်၊ ကလေးကစားသလိုမျိုး ကမ္ဘာကြီးကို အလွတ်ကြီးဝင်သိမ်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ပီပြင်တဲ့ motive ရှိတဲ့ villain ၊ ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ချင်းစီကြားက relationship တွေကို ပီပီပြင်ပြင် တည်ဆောက်ပြနိုင်တာ၊ ဇာတ်ပို့တွေကို သူ့နေရာနဲ့သူ နေရာပေးပြီး အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်တာ စတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
The Black Panther is not only one of the most entertaining recent superhero films but has an intelligence andapolitical dimension that such inchoate offerings as Suicide Squad and Justice League completely lacked. Independent UK
The intriguing thing about Black Panther is that it doesn’t look likeasuperhero film – moreawide-eyed fantasy romance: exciting, subversive and funny. The Guardian
Critic အားလုံးတညီတညွတ်တည်း ချီးကျူးကြတာကတော့ တခြား MUC ဇာတ်ကားတွေရဲ့ပုံစံခွက်ထဲကနေ ခွဲထွက်ထားတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Digital Spy ကဆိုရင် Black Panther ဒီလောက်ကောင်းရတာက တခြား Marvel ရုပ်ရှင်တွေနဲ့မတူလို့ဖြစ်တယ်လို့တောင် မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။
Ryan Coogler’s superhero adventure was bound to bealandmark in movie-making. And we’re pleased to say it’sagreat new addition to the MCU too – although it’s probably at its best when it feels least likeaMarvel film. Digital Spy
Rarely hasasuperhero origin story been as satisfying as Black Panther, which in many ways doesn’t feel likeatypical Marvel movie – and more power to that. The Star
“Black Panther” celebrates its hero’s heritage while delivering one of Marvel’s most all-around appealing standalone installments to date. Variety
Review တွေကိုဖတ်ကြည့်ပြီး လူကတော့ တော်တော် hype သွားပါပြီ။ နဂိုကတည်းက ကြည့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာမှန်ပေမယ့် အခုတော့ ဒီကရုပ်ရှင်ရုံတွေရဲ့ page တွေကို အားတိုင်းဝင်ကြည့်ပြီး ရုံတင်မယ့်ရက်ကို စောင့်နေတဲ့အဆင့်ကို ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် Rotten Tomatoes ရမှတ် ၁၀၀% ရစေခဲ့ချင်ပေမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းသရွေ့ အဲဒါကသိပ်အရေးမကြီးလှပါဘူး။
Previous Post: Tom Cruise က ‘Mission: Impossible – Fallout’ ထဲက စတန့်ကွက်တွေ ဘယ်လိုဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုတာ ထုတ်ဖော်ပြသ
Next Post: Superhero fan တွေအတွက် Deadpool2ကိုမကြာခင်ရုံတင်တော့မည်…